अन्तर्वार्ता Archives - Page2of 13 - Living with ICT
Home / अन्तर्वार्ता (page 2)
नेपालीलाई सुहाउँदा आकर्षक स्मार्टफोन सामसुङले ल्याएको छ : स्थापित
प्रणयरत्न स्थापित डेपुटी जनरल म्यानेजर (आइएम बिज) सामसुङ इलेक्ट्रिोनिक्स नेपाल सामसुङ इलेक्ट्रिोनिक्स नेपाल कुन अपेक्षाका साथ क्यान इन्फोटेकमा उपस्थित भएको छ ? क्यान इन्फोटेक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रविधि मेला हो । सामसुङ स्मार्टफोनमा रहेका फिचर तथा नयाँ प्रविधिहरुबारे अवलोकनकर्ताहरुलाई बुझाउन तथा अवगत गराउने मूल्य उद्देश्यका साथ सामसुङ उपस्थित भएको छ । सामसुङका नयाँ प्रडक्टको अनुभव गराउने कुरा पनि छँदै छ …
प्रविधिमा अबको ट्रेन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको हो
Nov 27, 2016	0
डा. समिर मास्के संस्थापक एवं सिइओ, फ्युजमेसिन सूचना प्रविधिको देश अमेरिकामा रही करियर चम्काउने केही नेपालीमध्य डा. समिर मास्के पनि एक हुन्, जो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा निरन्तर ३ वर्षदेखि प्रोडक्ट बनाइरहेका छन् । एआई प्रोडक्ट बनाउने फ्युजमेसिनका संस्थापक एवं सिइओ हुन् उनी । कम्प्युटर साइन्सअन्तर्गत स्पिच प्रोसेसिगंमा कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका उनी सोही युनिभर्सिटीमा एडजक्न्ड एशोसिएट प्रोफेसर रुपमा कार्यरत छन् । …
अमेरिकन ब्राण्ड भएकोले चाडै स्थापित हुने विश्वास छ
संगीता सिलवाल मार्केटिङ म्यानेजर, प्रिज्म टेक्नोलोजिज स्मार्टफोनको बजार आइटी उद्योगमा अहिले सबैभन्दा प्रतिस्प्रधी छ । नेपालमा पनि हरेक महिना कुनै न कुनै नया ब्राण्डहरु भित्रिरहेका छन । यसैक्रममा केहि महिना अगाडी अमेरिकी ब्राण्ड इनफोकसका स्मार्टफोनहरु बजारमा आएका छन् । स्मार्टफोनको बजार र इनफोकसका बारेमा प्रिज्म टेक्नोलोजिजका मार्केटिङ म्यानेजर संगीता सिलवालसग हामिले केहि कुराकानी गरेका छौ । मोवाइल बजारमा प्रिज्म पुरानो …
केयुलाई रोक्न अाइटी पार्क बन्द गरिएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो : डा. पाेखरेल
अाइटी पार्क स्थगनलार्इ लिएर काठमाडाैं विश्वविद्यालय (केयू) र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबीच दूरी बढेकाे छ । केयूले आफ्नै नजिक बनेपा-पनाैतीमा रहेकाे सूचना प्रविधि पार्क (अाइटी पार्क) गएर काम गर्न ४ वर्षदेखि निरन्तर लबिङ गरिरहेको थियो । तर, केयु र आइटी पार्कका छुट्टाछुट्टै उद्देश्य हुँदा काम गर्न जाने अवस्था थिएन । लामो समयसम्म नचलेको आइटी पार्क चलाउन सार्वजिनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल …
सगरमाथामा सिएसअाइटी- ‘अध्ययन सुरु गरेदेखि जब प्लेसमेन्टसम्मको लागि गाइड गर्दछौँ’
गंगा सुब्बा कोअर्डिनेटर, सिएसआइटी प्रोग्राम, सगरमाथा कलेज सगरमाथा कलेजले वि.सं. २०६८ सालदेखि बिएससी सिएसआइटी अध्यापन गराउन थालेको हो । पढाउने बाहेक रिसर्च र प्राक्टिकलमा विद्यार्थीलाई एकदमै जोड दिएका छौँ । सबै विद्यार्थीलाई समान रुपमा ध्यान पुगोस् र अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाउन हामीले एक्जाम डिपार्टमेन्ट, ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट र प्लेसमेन्ट डिपार्टमेन्ट गरेर भिन्नभिन्न आइटी डिपार्टमेन्ट बनाएका छौँ । कलेजले विद्यार्थीले पढ्न सुरु …
अाइएसएमटी- आइटीको विदेशी डिग्री नेपालमै
ध्रुवबाबु जोशी प्रिन्सिपल, आइएसएमटी कलेज तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ, युएसएमा आइटी प्रोफेसनलहरुले घण्टाको ४० डलर कमाउँछन् । अमेरिकामा बस्ने एक जना मेरो साथीले त्यहाँ आइटी प्रोफेसनलहरुहरुको माग र बजार बढेको जानकारी दिए । यसबारे मलाई जान्न मन लाग्यो र थप रिसर्च गर्न थालें । म विश्वस्त भएकी आइटी ग्रयाजुएटका लागि विश्वबजारमा म्यासिभ करियर अपरच्युनिटी रहेछ । यो प्रोस्पेक्ट अमेरिकामा मात्रै होइन …
‘सिएसआइटी’ कम्प्युटर साइन्स र आइटीको कम्बांइन्ड शैक्षिक कार्यक्रम हो
शंकर प्रसाद शर्मा प्रमुख, सिएसआइटी कार्यक्रम, टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज सिएसआइटी कलेज अर्जनाइजेशन नेपाल(सिकन) का सदस्य तथा टेक्सास कलेजका आइटी कार्यक्रमका संयोजक शंकर प्रसाद शर्मासग हामिले सिएसआइटी कार्यक्रम र टेक्सास कलेजका विषयमा केहि कुराकानी गरेका छौ । टेक्सास कलेजको नेपालको आइटी शिक्षा र आइटी इन्डस्ट्रीमा गरेको योगदानलाइ कसरि मुल्यांकन गर्नुहुन्छ? टेक्सास कलेज विगत ६ वर्षदेखि आइटीको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कलेज …
स्टार्टअप बिजनेशमा भेन्चर्स क्यापिटालिस्टको लगानी आवश्यक छ
सुशील पोखरेल नेपालका युवा उद्यमी हुन् । उनी सुस्मित इन्टरनेश्नलका प्रमुख, हाइडे भिलेज प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक, युवा उद्यमी घरका संस्थापक सदस्य समेत हुन् । साथै उनी लिभिगं विथ आइसिटीको आयोजनामा भएको आइसिटी स्टार्टअप अवार्ड २०१६ का जुरी मेम्बरका संयोजक समेत हुन् । स्टार्टअप कल्चर, लगानी र यसको सम्भावनाको बारेमा सह सम्पादक शिब बस्नेतले केहि कुराकानी गरेका छन् । उद्यमशीलताको क्षेत्रमा …
अाइटी कलेज वार्ता- ‘बिसिए र बिअाइटी अध्ययनका लागि केसीसी एक उत्कृष्ट कलेज हाे’
Sep 29, 2016	1
कान्तिपुर सिटी कलेजले कस्ता आइटी प्रोग्रामहरु सञ्चालनगर्दै आएको छ ? विगत १६ वर्षदेखि सञ्चालित यस कलेजमा बिसिए (BCA), बिआइटी (BIT), पिजिडिसिए र एमसिएलगायतका शैक्षिककार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । बिसिए तथा बिआइटी अध्ययन सकेपछि कस्तो रोजगारी पाउन सकिन्छ ? सफ्टवेर इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि बढाउन यस्ता कोर्सहरु गरिन्छन् । सफ्टवेयर क्षेत्रको विस्तार तिब्र गतिमा भइरहेको हालको अवस्थामा बिसिए र बिआइटी …
फुटसल प्रतियोगितामा १९ सीएसआइटी कलेजका २७ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै
सौरभ खत्री विद्यार्थी, सामाजिक कलेज (छैठौ सेमेस्टर) सामाजिक कलेजको आयोजनामा हुन लागेको अन्तर सिएसआइटी कलेज फुटसल प्रतियोगिता को तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ? सामाजिक कलेजको आयोजनामा यही असोज ६ र ७ गते राजधानीस्थित धुम्बाराहीमा पहिलो अन्तर सिएसआइटी कलेज फुटसल प्रतियोगिता हुदैछ । प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहभागी हुने कलेजको फाइनल डाटा आइसकेको छ । हामी फुटसल …